बाटोमा एक लाख पाएपछि….. – Hamropahuch
खलंगा । बाटोमा एक लाख रुपैयाँ पाएपछि के गर्नुहुन्छ तपाई ? आफैले राख्नुहुन्छ, प्रहरीलाई बुझाउनुहुन्छ, आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ ? यस्तै प्रश्न तपाईको मनमा उब्जिन सक्छ तर बास्तविक शुक्रबार वेलुका गैरीखालीमा दुई यूवाले एक लाख पाए । उनीहरुले प्रहरी मार्फत सम्बन्धीत व्यक्तिलाई बुझाएका छन् ।
करीव १८ घण्टा पछि रकम हराएका कुशे गाँउपालिका ९ मेलविसाउना निवासी ४५ बर्षिय धर्मे सार्की सम्पर्क आएकोले उनलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएस्पी मधुकुमार थापाले बताए । प्रहरी प्रमुख थापाका अनुसार रकम हराउने धर्मे कमाईका लागि केही समय अघि भारत गएका थिए । भारतबाट दशै मनाउन घरफर्केने क्रममा नेपालगञ्जमा भारतिय रुपैया सटाएर शुक्रवार मात्र जाजरकोट सदरमुकाम आईपुगेका थिए । मदिरा सेवन गरेका कारण उनले रकम हराएका थिए ।